Costa Rica dia nanendry ny minisitry ny fizahantany vaovao: María Amalia Revelo Raventós
Home » Ny olona ao amin'ny Travel & fizahan-tany » Costa Rica dia nanendry ny minisitry ny fizahantany vaovao: María Amalia Revelo Raventós
Ny filoham-pirenena Costa Rica voafidy vao haingana, Andriamatoa Carlos Alvarado Quesada, dia nifidy an'i María Amalia Revelo Raventós ho minisitry ny fizahantany vaovao ao amin'ny firenena, nisolo an'i Mauricio Ventura ho lohan'ny departemanta.
María Amalia Revelo dia manana mari-pahaizana master in Business Administration avy amin'ny INCAE Business School malaza ary mari-pahaizana licence momba ny statistikan'i University of Costa Rica. Nirehareha tamin'ny traikefa efa an-taonany 40 tao amin'ny sehatry ny fizahan-tany ao amin'ny firenena izy, izay toerana nitana andraikitra ambony na amin'ny sehatra miankina na tsy miankina. Mpitantana lefitra sady talen'ny marketing ao amin'ny Birao fizahan-tany Costa Rican (TIC) izy, izay namolavola sy nampihatra paikady marketing lehibe hampiroboroboana ny indostrian'ny fizahantany any Costa Rica.
Anisan'ny laharam-pahamehany amin'ny maha minisitry ny fizahantany ny fampiroboroboana ireo orinasa salantsalany sy kely; ny fampiroboroboana ny toerana vaovao sy ny vokatra eo an-toerana, miaraka amin'ny fifantohana manokana amin'ny kolotsaina sy ny gastrisme; ary ny fanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin'ny sehatra miankina sy tsy miankina. Ny fitohanana dia ho axis cross amin'ny hetsika rehetra ataony ao amin'ny Minisitera. Ankoatr'izay dia hiasa amin'ny fametrahana an'i Costa Rica ho toerana mahasarika ho an'ny indostria MICE ihany koa izy (izao nisokatra ny Convention Center vaovao an'ny firenena) sy ny fisintomana ireo zotram-sidina vaovao mankany amin'ny firenena.
Talohan'ny fotoana nanendrena azy, María Amalia Revelo dia nitana ny toeran'ny Tale ara-barotra sy mpanolotsaina ao amin'ny Aeris Holding, izay niandraiketany tamin'ny famolavolana zotram-sidina vaovao sy ny fisarihana zotram-piaramanidina mankany amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Juan Santamaría (San José) sy Daniel Oduber Quirós Aiport (Liberia) .
Ny minisitry ny fizahantany vaovao koa dia nandray anjara mavitrika tamin'ny sendika sy fikambanana eo amin'ny sehatra tsy miankina ao Costa Rica. Mpikambana tao amin'ny filankevi-pitantanana tao amin'ny National Chambre of Tourism (Canatur), Site Chapter Costa Rica, ny Association of Professionals in Tourism (ACOPROT) ary ny Association of the Meetings and Incentives Association.
María Amalia Revelo dia nahazo mari-pankasitrahana lehibe nandritra ny asany tamin'ny sehatry ny fizahan-tany Costa Rican, anisan'izany ny "Promoter tsara indrindra" an'ny EXPOTUR tamin'ny 1987 sy ny "Vehivavy mpisava lalana amin'ny fizahan-tany" tamin'ny 2007.
Ny zava-niainan'i Revelo sy ny asany dia nahatonga fanantenana sy fahatokisana lehibe teo amin'ny sehatry ny fizahan-tany Costa Rica. “Faly be izahay tamin'ny fanendrena an'i María Amalia. Fantatray fa miasa mafy izy, koa matoky izahay fa ny traikefa lehibe ananany eo amin'ny sehatry ny indostria dia handray anjara betsaka amin'ny fampandrosoana sy fanatsarana ny fizahantany eto amin'ny firenena, "hoy i Sary Valverde, filohan'ny National Chambre of Tourism (Canatur).
Isle of MTV Malta 2018: nambarana ny filaharana farany ho an'ny fetin'ny mozika fahavaratra
Tsidiho ny fitsidihan'i Estonia 'Top 5 Torohevitra' hijerena bera